Midowga musharaxiinta "Farmaajo waa dambiile qaran" | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga musharaxiinta “Farmaajo waa dambiile qaran”
Golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2021 ayaa ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu yahay dambiile qaran, kaddib weerarradii ka dhanka ahaa ee lagu qaaday qaar kamida xubanaha goalahaasi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qoraal kasoo baxay Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dagaallkii ka dhacay Muqdisho iyo weerarkii lagu qaaday xubno kamid ah Midowga Musharixiinta uu mas’uul ka yahay Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay sheegeen in uu rasaaseeyay dad si nabad ah u banaanbaxayay.
“Golaha Midowga Musharaxiinta waxay horay u aaminsanaayeen haddana u caddaatay in Madaxweyne Farmaajo uusan nabad iyo xasillooni u rabin dalka, daacadna ka aheyn inuu galo doorasho loo siman yahay, waxay maaweelayaashiisa siyaasadeed iyo hawadiisa beenta ah tustay in awoodda dalka uu xoog ku heysan karo, sharci darrana ku sii joogi karo” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka golaha.
Golahu wuxuu ku dhawaaqay inay joogteyn doonaan bannaan baxyada, si ay shacabka u muujiyaan rabitaankooda iyo in dalka aysan ka abuurmin waxa ay ugu yeereen diktaatooriyad.
Sidoo kale golaha ay ku mideysn yihiin musharixiinta waxaa ay sheegeen inay horay u aaminsanaayeen haddana u cadaatay in Madaxweyne hore Farmaajo uusan nabad iyo xasillooni u rabin dalka, daacadna ka aheyn inuu galo doorasho loo siman yahay.
Ugu dambeyn waxaa ay sheegeen in Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo u arkaan in uu yahay dambiile qaran uusan sinabada qeyb uga noqon karin xal u helidda siyaasadda dalka ee xilliga kala-guurka ah, loona diido in uu ka qeyb-galo doorashada sida uu qabo dastuurka KMG ah ee waddanka uyaal.
Halkan ka akhriso warsaxaafadeedka Golaha oo dhammeystiran: